▷ ➡️ သမ္မာကျမ်းစာအရ ဝိညာဉ်လောက ဘယ်လိုလဲ။
ဘယ်လိုလဲ el Mundo ဝိညာဉ်များ။ ဝိညာဉ်လောကသည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ၏ တကယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ ဝိညာဉ်လောကတွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် ဝိညာဉ်ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဝိညာဉ်လောကသည် ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နတ်ဆိုးများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတွင် အဓိကနယ်ပယ်သုံးခုရှိသည်။ ကာယကမ္ဘာ၊ စိတ်လောက၊ ဝိညာဉ်လောက။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဤလောက၏ ရှုထောင့်သုံးရပ်တွင် ပါဝင်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ဝိညာဉ်များရှိသည်။
1 နာမ်ဝိညာဉ်လောက ဘယ်လိုလဲ- ဘုရားသခင်နဲ့ လူ
3 ဝိညာဉ်လောကသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
နာမ်ဝိညာဉ်လောက ဘယ်လိုလဲ- ဘုရားသခင်နဲ့ လူ
ဝိညာဉ်လောကဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ အဲဒီထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေပါလဲ။
သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးသည် ဝိညာဉ်တော်မှလာရမည်။.
ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။ သူ့ကို ချစ်မြတ်နိုးသော သူတို့သည် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်၊
ဘဝအားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မှလာသည်။ လူတစ်ဦးစီအား ဝိညာဉ်ပေး၍ ဝိညာဉ်ထွက်သွားသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ခွဲခွာရသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်ကို လိုအပ်သောကြောင့် ခံရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နောင်တရပြီး သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ စတင်ကျိန်းဝပ်သည်။ငါတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပေါင်းတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် တူညီသောဝိညာဉ်တော်ကို ဝေမျှသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားယုံကြည်သူများနှင့် ပေါင်းစည်းရန် ဝိညာဉ်ရေးလောကမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ပေတရုကလည်း၊ နောင်တရကြလော့။ သို့ပြုလျှင်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအဘို့အလိုငှါ၊ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့အပြင်၊ ဝိညာဉ်လောက၌ ပြုမူနေကြသော အခြားသူများလည်း ရှိသေးသည်။ ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နတ်ဆိုးများ. ကောင်းကင်တမန်များသည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းရန်နှင့်သူ၏အမိန့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန် ၀ န်ခံသောဝိညာဉ်များဖြစ်သည်။ အယ်လ် diablo သူသည် နတ်ဆိုးဟုခေါ်သော အခြားကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်သော ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း၏အမွေဆက်ခံမည့်သူများအစေခံရန် စေလွှတ်လိုက်သော အမှုတော်ဆောင်ဝိညာဉ်များအားလုံး မဟုတ်လော။
မာရ်နတ်သည် သူသည် ဘုရားသခင်ကို အနိုင်ယူခဲ့သည်ကို သိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း သူ၏နောက်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်မကျရောက်မီ တတ်နိုင်သမျှ ပျက်စီးအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်လောကတွင် ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နတ်ဆိုးများသည် ရန်ဖြစ်ကြသည် ။ ဟိ နတ်ဆိုးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးစားကြသည်။ငါတို့ကို ဖျက်ဆီး၍ ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်စေသော်လည်း၊ ကောင်းကင်တမန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီကာကွယ်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
ငါတို့အားလုံးမှာရွေးချယ်စရာရှိတယ်။ ဘုရားသခင် (သို့) မာရ်နတ်ဘက်မှာနေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကောင်းသောလွှမ်းမိုးမှုများကို တိုက်ထုတ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ထံ လက်အောက်ခံရန် လိုအပ်သည်။ ဤတိုက်ပွဲဟုခေါ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲ.
ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့။ သူသည်သင်တို့ထံကပြေးသွားလိမ့်မည်။
ဝိညာဉ်လောကသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ဝိညာဉ်လောကသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် လွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သတိမထားမိနိုင်သော်လည်း၊ ဝိညာဉ်လောက၌ ဖြစ်ပျက်သောအရာသည် အရာအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည်။
ပထမဦးစွာ၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဝိညာဉ်လောကရှိ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံခြင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကို ပေးသနားသော သူ၏စွမ်းအားတော်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုအားဖြင့် ပြောင်းလဲသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပါ. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးများ၊ ဆန္ဒများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စတင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ရှိသော သဘာဝကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်၌ စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်တွင် လုပ်ဆောင်သော အလုပ်သည် အရာအားလုံးကို လွှမ်းမိုးပါသည်။
၀ ိညာဉ်လောကသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မခံရအောင် သတိထားရမယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းပြချက်မရှိဘဲ ဆိုးရွားသောပြဿနာအချို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် မှားယွင်းသောဝိညာဉ်ရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ရှောင်ရှားရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အားလုံးကို ငြင်းပယ်ပြီး ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို အမြဲရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
သတိနှင့်သတိရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ရန်သူ မာရ်နတ်သည် ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့၊ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ သင်တို့၏ညီအစ်ကိုတို့၌ တူညီသောဆင်းရဲဒုက္ခများ ပြည့်စုံကြောင်းကို သိလျက်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌ ခိုင်ခံ့စွာ ဆီးတားသောသူ၊
ဝိညာဉ်လောကသည် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ အရေးကြီးသောအခြမ်းဖြစ်သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည်အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ကိုစွဲလမ်းမှုမရှိ၊ အခြားတစ်ဖက်ကိုမေ့မသွားစေရန်ဟန်ချက်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ နာမ်၊ စိတ်နှင့် ရုပ်တို့သည် အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေသည်။
ငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည် သင်တို့အား လုံးလုံး သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ် ကြွလာတော်မူခြင်းအတွက် သင်တို့၏ဖြစ်တည်မှု၊ နာမ်ဝိညာဉ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ရှိသမျှတို့ကို အပြစ်ကင်းစင်စေကြလော့။
၁ သက်သာလောနိတ် ၅:၂၂
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဤလမ်းညွှန်တိုတိုသည် သင့်အား နားလည်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအရ ဝိညာဉ်လောကသည် မည်သို့ရှိသနည်း။ အခုမင်းသိချင်ရင် ယေရုရှလင်မြို့သစ်သည်မည်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ ဆက်လက်ရှာဖွေသည် Discover.online ။
ယေရှု ဘာကြောင့် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သလဲ။